Kulan lagu Daahfurayay Mashruuca taakulaynta habnololeedka qoysaska ay saameeyeen abaaruhu oo kaqabsoomay Magalada Jigjiga
Jigjiga(cakaaranews)Talaado, 19ka June, 2018. Waxaa xarunta deegaanka kaqabsoomay kulan balaadhan oo lagu daahfurayay mashruuca taakulaynta hab-nololeedka qoysaska ay saameeyeen abaarihii kal hore islamarkaana ay fulintiisa iska kaashadeen xukuumada DDSI, hay’adaha UNDP IYO FAO. Iyadoo mashruucana maalgalintiisa laga helay dawlada Austria.
Kulankan daahfurka ah ayaa waxaa kasooqaybgalay wasiirka xafiiska Horumarinta Khayraadka biyaha mudane axmed cabdi maxamed, wasiirka xafiiska waxbarashada DDSI mudane ibraahim aadan mahad, masuuliyiin kasocday wadanka austeria. Wasiiro heerdeegaan ah, maareyayaal, agaasimayaal iyo waliba khabiiro kakala socday xafiisyada bahwadaagta ah.
Hadaba, kulankan ayaa waxaa warbaahinta uga waramay Wasiirka Xafiiska Horumarinta Khayraadka Biyaha mudane Axmed Cabdi Maxamed oo sheegay in kulankani ahaa mid lagu daahfurayay mashruuca hab-nololeedka qoysaska ay abaaruhu saameeyeen. Kaasoo ah mashruucu loogu talagalay kor uqaadista nolosha bulshada. Wuxuuna intaas kudaray wasiirku in mashruucan ay maalgalisay dawlada austeria islamarkaana ay mashruucan si wada jir ah u fulinayaan hay’adaha UNDP, FAO iyo hay’adaha dawliga ah ee deegaanka ee sida xafiisyada xoolaha, DPPP, beeraha, biyaha, caafimaadka iyo xafiiska maaliyada oo ah iskuxidhihii. Wuxuuna tilmaamay in mashruucani uu ka hawlgali doonaa degmada wardheer ee gobolka doolo iyo degmada qabridahar ee gobolka qoraxey. Sidookale wasiirka oo hadalkiisa siiwata ayaa tilmaamay in mashruucani uu yahay mid 2 sano ah islamarkaana uu kor uqaadi doono heerka nololeed ee qoysaska ay abaartii kalhore saamaysay islamarkaana uu kataageeri doono dhanka noloshaooda danbe isagoo siyaabo kaladuwan u taakulaynaya oo ay kamid tahay xoolo siin iyo waliba barashada kaafaa'iidaysiga ugu wanaagsan ee dhaqashada xoolaha iyo beerashadaba.
Dhanakale, masuuliyiinta kasocday wadanka Austria oo isna dhankooda kahadlay ayaa shegay in mashruucani uu qaybwayn kaqadanyo dadaalada lagu dhimayo saboolnimada islamrkaana lagu taakulaynayo bulshada ay abaartu saamaysay. Waxayna tilmaameen in mashruucu uu bulshada kataageerayo noloshooda islamarkaana uu usamaynayo dajin isagoo udiiyaarinaya xoolihii, beerihii iyo adeegyo kale.
Iskusoowada duuboo, mashruucan ayaa ah mid qayb ka ah ladagaalanka saboolnimada islamarkaana wax lagaga badalayo bulshada xoolodhaqatada ah ee ay abaartii kal hore saamasay. Wuuuna mashruucani ufaaiidayn doonaa qoysas tiradoodu kor udhaafayso 20,00 oo qoys.
Jigjiga(Cakaaranews) Talaado, 19ka June 2018. Safaarada dalka maraykana ee dalkeena itoobiya ee uu fadhigeedu yahay addis-ababa ayaa tababar aqoon koradhsi ah uqabatay qaarkamid ah shaqaalaha bahda warbaahinta deegaanka iyo bahwadaagtooda.
Hadaba tababarkan aqoon koradhsiga ah oo ay kasoo qaybgaleen wasiirka xafiiska xidhiidhka arrimaha dawlada DDSI mudane Idiriis Ismaaciil, maareeyaha wakaalada warbaahinta DDSI mudane Farxaan Maxamuud Axmed, qaar kamid ah wariyeyaasha ESTV iyo waliba qaarkamid ah shaqaalaha saxaafada bahwadaagta la ah warbaahinta deegaanka ayaa waxaa ugu horayn ka hadlay wasiirka xafiiska xidhiidhka arrimaha dawlada DDSI mudane Idiriis Ismaaciil oo ugu horayn sheegay inuu tababarkan yahay mid aqoon iswaydaarsi ah islamarkaana kor uqaadaya garaadka aqooneed bahda warbaahinta deegaanka, wuxuuna wasiirku intaa ku daray in maadaama oo ay jiraan qodobo tastuurka kamid ah oo qeexaya in shacabku xaq uleeyihiin inay helaan warar sugan oo ku salaysan xaqiiqda.iyadoo uu wasiirku xusay in tababarkan oo ay bixinayaan khubura ka socda safaarada maraykanka ee dalkeena itoobiya uu socon doono mudo 2 maalmood ah.
Ugu danbayna wasiirka ayaa tababar qaatayaasha kula dardaarmay inay si fiican uqaataan cashirka mudada uu tababarku socdo maadaama uu tababarkani yahay mid muhiim ah islamarkaana xidhiidh la leh mustaqbalkiina shaqo, isagoo carabka ku adkeeyay in tababarkani yahay mid ay ku tartamayaan dhamaan dawlada deegaanada dalka islamarkaana deegaanka ku guulaystaa uu gacansiin fiican heli doono.